အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် Dopaminergic အချက်ပြမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Apomorphine ၏အသစ်အဆန်း N2 (2013) အပေါ်သက်ရောက်မှုမှသက်သေအထောက်အထား - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်
အသစ်တွေ့ရှိမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် Dopaminergic အချက်ပြမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Apomorphine ၏ Novelty N2 အပေါ်သက်ရောက်မှုမှသက်သေအထောက်အထား (၂၀၁၃) ။
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013; 8 (6): e66469 ။
2013 ဇွန် 20 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0066469
Mauricio Rangel-Gomez,1,* Clayton Hickey,1 Therese ဗန် Amelsvoort,2 Pierre Bet,3 နှင့် Martijn Meeter1
Stefano အယ်လ် Sensi, အယ်ဒီတာ
သုတေသနများစွာပြုလုပ်ထားသော်လည်း dopamine သည်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတွင်တိုက်ရိုက်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲသိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုကြိုးကိုင်ရာတွင်အဓိကပါဝင်ခြင်းရှိ၊ ဤသည်မရေရာဒွိဟအသစ်အဆန်းခြယ်လှယ်နှင့် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုနောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည်အဘယ်မှာရှိစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများအပေါ်မှီခိုထံမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် apomorphine (D1 / D2 agonist) ကို အသုံးပြု၍ dopamine လုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးချပြီးအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲ၏အာရုံကြောအညွှန်းကိန်းများပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာသည်။ သီးခြားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာစားပွဲများတွင်ပါဝင်သူများသည်ဗွန် Restorff လုပ်ငန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ Apomorphine သည်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသောအသစ်ဖြစ်သော N2၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည် (ERP) အစိတ်အပိုင်းသည်အသစ်တွေ့ရှိမှု၏အစောပိုင်းရှုထောင့်များကိုရည်ညွှန်းရန်စဉ်းစားပြီးဝတ္ထု - စာလုံးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောမှတ်မိစေခဲ့သည်။ Apomorphine သည်အသစ်ဖြစ်သော P3a ၏လွှဲခွင်ကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် D1 / D2 receptor activation ကိုတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည် ၀ တ္ထုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံခံမှုကိုအားကောင်းစေပြီးဤအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ encoded လုပ်နိုင်စေသည်။
၀ တ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများကိုတိကျစွာနှင့်လျှင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းသည်အာရုံ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တို့အပေါ်အခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအပေါ်မူတည်သည်။ ။ လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်းကိုလေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အဆောက်အအုံများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်၊ မည်သည့် neurotransmitter စနစ်များကဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်ကိုအသစ်တွေ့ရှိမှုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ကိုမူမသေချာသေးပါ။
ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာ (ERP) အမှတ်အသားများသည်အသစ်အဆန်းပြုပြင်ခြင်း၏ neuromodulatory ယန္တရားများကိုနားလည်ရန်သင့်တော်သည်။ အသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုများမှာများသောအားဖြင့် ERP အစိတ်အပိုင်းနှစ်မျိုးဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ရှေ့ပိုင်းအသစ် N2 (Pritchard ရှိ N2b နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ)  ဝတ္ထုနှိုးဆွဖို့အာရုံစူးစိုက်မှု၏ခွဲဝေနှင့်ဆက်စပ်သော N2 ၏ဌာနခွဲ) နှင့် P3 , ။ ယေဘုယျအားဖြင့် N2 သည်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အပြောင်းအလဲကိုထင်ဟပ်စေသည် , နှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလွန်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတည်းအထပ်ထပ်ပြီးနောက်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်းကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲ (၃) ပိုင်းခွဲခြားထားသည် - N2a, N2b နှင့် N2c ။ ဤရွေ့ကားမတိုက်ဆိုင်အဆိုးမြင်အဆိုးမြင် (N2a), anterior N2 သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်း N2 (N2b) နှင့် posterior N2 (N2c; ) ။ N2a / မတိုက်ဆိုင်သည့်အဆိုးမြင်သဘောထားများသည် fronto-central အမြင့်ဆုံးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဝေးကွာခြင်းကိုအလိုအလျောက်အာရုံကြောတုန့်ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်စေသည် , , သို့သော် N2b သည် P3a အစိတ်အပိုင်းကိုအများအားဖြင့်ရှေ့တွင်ဖော်ပြလေ့ရှိပြီးအမြင်အာရုံ Oddball လုပ်ငန်းတာဝန်၌သာလေ့ရှိသည်။ , ။ ဒါကြောင့်မသက်ဆိုင်အလုပ်ဆက်စပ်မှု၏ oddball လှုံ့ဆော်မှုများကထုတ်ယူကြောင်းအတွက်အဆုံးစွန်သောအစိတ်အပိုင်း, semiautomatic စဉ်းစားသည် , ။ ပုံမှန်အားဖြင့် P2b အစိတ်အပိုင်းရှေ့တွင်ရှိသော N3c သည်ခွဲခြားခြင်းအလုပ်များနှင့်ဆက်စပ်သည် .
P3 အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းခွဲနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ fronto-central P3a (သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်း P3) နှင့် centro-parietal P3b ။ P3a သည်နောက်ဆက်တွဲအပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီးသတိထားအာရုံစိုက်မှုပြောင်းလဲသည့်ယန္တရား၏အမှတ်အသားဖြစ်ရန် postulated ဖြစ်ပါတယ်  နှင့်အာရုံများ၏အညွှန်းကိန်းဖြစ်နိုင်သည် ။ P3b သည်လှုံ့ဆော်မှုအဓိပ္ပာယ်နှင့်အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရည်ညွှန်းသည် , ။ ဤအချက်နှင့်အညီ P3b သည်နောက်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တိုးမြှင့်ထားသည် .
ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရ N2 နှင့် P3 တို့ကိုအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏မော်လီကျူးအခြေခံကိုလေ့လာရန်အများအားဖြင့် neurotransmitters ၏ကျယ်ပြန့်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Soltani နှင့် Knight တို့ဖြစ်သည် တစ် ဦး ပြည့်စုံစာပေပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်, oddball- ရူးနှမ်း P3 ၏လွှဲခွင်အများအပြား monoamines, အထူးသဖြင့် dopamine နှင့် norepinephrine ၏စစ်ဆင်ရေးအပေါ်မှီခိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီနှင့်ကိုက်ညီ Gabbay နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  d-amphetamine သည်ရွေးချယ်မှုမရှိသော dopamine နှင့် norepinephrine agonist သည် P3a, N100 နှင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအားအဆိုးမြင်မှု (RON) ၏ဓာတ်ပြုမှုကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုမရှိသောပါဝင်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက d-amphetamine ကိုပိုမိုနှစ်သက်သောပါဝင်သူများသည်ပိုမိုကြီးမားသော P3a လွှဲခွင်၊ လွှဲခွင် N100 လျှော့ချခြင်းနှင့် Amphetamine ပြီးနောက် amplitude RON ကိုတင်ပြသည်။
တိကျတဲ့ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကိုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူသုတေသနပြုခြင်းသို့မဟုတ်လူနာများအားဆေးဝါးများနှင့်ပိတ်ထားသည့်အခြေအနေများတွင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လူနာ dopaminergic လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ကြောင်း neuroleptic ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ dopamine စနစ်ကကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော schizophrenia တွင်, မတူကွဲပြားသောအဆိုးမြင်မှု (MMN) ကိုလျှော့ချသည်။ ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) လူနာများနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် L-Dopa ၏အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ် dopaminergic agonists များသည်လက်နက်ကိုင်သုံး bandit လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ဆန်းစစ်ချက်အရအသစ်အဆန်းကိုမနှစ်သက်ပါ။ သို့သျောလညျး, ဒီတွေ့ရှိချက် impulsive compulsive အပြုအမူနှင့်အတူလူနာပါဝင်သောနမူနာအတွက် comorbidity ကြောင့်, အနက်ကိုဘော်ပြရန်ခက်ခဲသည်။ .
အခွားသောလေ့လာမှုများအချို့ဒေသများတွင် activation နှင့် neurotransmitter ဗီဇ polymorphic အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြရသောဆက်စပ်မှုချဉ်းကပ်မှု, ပါပြီ။ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ၏အချက်အလက်များသည် dopamine ကြွယ်ဝသော mesolimbic ဒေသများရှိ substia nigra နှင့် ventral tegmental novelရိယာစသည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသသည်။ ။ dopamine ရရှိနိုင်မှု (COMT) နှင့် D2 receptors (ANKK1) ၏သိပ်သည်းဆနှင့်သက်ဆိုင်သောမျိုးဗီဇ၏ Polymorphisms အသစ်တွေ့ရှိမှု၏အပြောင်းအလဲကို modulate မှတွေ့ရှိခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောပိုမိုမြင့်မား P3a လွှဲခွင်သည်ဤ variable တွေကိုနှစ်ခု၏ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ဆက်စပ်သော ။ dopaminergic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (DAT1) အတွက် encoding genes များကိုလုပ်ငန်းအသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုလည်းဆိုလိုသည်။ ။ ဤလေ့လာမှုများကပိုမိုမြင့်မားသော dopaminergic ရရှိနိုင်မှုသည်အသစ်သောဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထပ်မံပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများနှင့်လေ့လာချက်များအရ ထပ်မံ၍ dopamine အဆင့်နိမ့်သည့်အခါ P3a လွှဲခွင်ကိုလျှော့ချသည် , .
သို့သော်မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုတွင်ကင်ညာနှင့်ကာဟွန်းတို့ဖြစ်သည်  dopamine ကိုင်တွယ်မှု၏အသစ်သောဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် MMN နှင့် P3 ကဲ့သို့အားနည်းနေပြီး၊ dopamine ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် subcortical processing အပေါ်သက်ရောက်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများလည်း dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို receptor မှီခိုကြောင်းအကြံပြု, D1 / D2 receptors ၏ agonism သိမှုဆိုင်ရာအာရုံလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အရှိန်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများသည်အသစ်သောပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် dopamine လုပ်ဆောင်မှုကိုအကြံပြုသော်လည်း၎င်းအခန်း၏တိကျသောသဘောသဘာဝကိုမူမသိရသေးပါ။ ဒါဟာ dopamine အာရုံကြောကိုဖန်တီးရန်ပြုမူဖြစ်နိုင်သည် အာရုံများကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုရန်, အရှင်အသစ်အဆန်းထောက်လှမ်းအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား ။ တနည်းအားဖြင့် dopaminergic ဦး နှောက်inရိယာများတွင်အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုသည်နောက်ဆက်တွဲကိုထင်ဟပ်နိုင်သည် တုံ့ပြန်မှု အပြုအမူနှင့်သက်ဆိုင်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအတွက်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုရည်ညွှန်းသည် .
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ D1 / D2 agonist apomorphine ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တိုင်းတာအသစ်အဆန်း -related ERP အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့် dopamine system ကိုခြယ်လှယ်။ ဒီနည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်သောအပြောင်းအလဲနဲ့ dopamine ၏အခန်းကဏ္entကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုထားသည် , ။ သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်နှစ်ခုအစည်းအဝေးများ, apomorphine ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါနှင့်ဆားရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါတ ဦး တည်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် D1 / D2 အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာငါတို့သည် electroencephalogram မှတ်တမ်းတင်စဉ်ကသင်တန်းသားများကိုတစ် ဦး ချင်းစီ session တစ်ခုအတွက်ဗွန် Restorff တာဝန်ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်စကားလုံးများစာရင်းကိုလေ့လာကြသည်။ အချို့သောထူးခြားသောစာလုံးများနှင့်အရောင်များကြောင့်ထင်ရှားသည်။ ဤရွေ့ကားနောက်ပိုင်းတွင်ပိုကောင်းကိုအောကျမေ့နေကြသည်  သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးအသစ်အဆန်း၏ကြောင့်ဖြစ်သည် .
Extant ERP လေ့လာမှုအသစ်များသည်ဗွန် Restorff အလုပ်ထက် 'oddball' ပါရာဒိုင်းများကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ပုံမှန် oddball လုပ်ငန်းတာဝန်တွင်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည်ပါဝင်သူများအနေဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဆက်တိုက်တင်ပြသည့်တိကျသောပစ်မှတ်တစ်ခုကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ဗွန် Restorff လုပ်ငန်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ပထမ ဦး စွာအသစ်သောအပြောင်းအလဲနဲ့အမူအကျင့်ညွှန်းကိန်း, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အမည်ရပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုနှုန်းပေးပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်အသစ်အဆန်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုများသည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုအပေါ်အသစ်အဆန်း၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလက်ရှိလေ့လာမှုသည် dopamine သည်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ through မှတစ်ဆင့်သင်ယူခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟူသောအတွေးဖြင့်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအကျိုးစီးပွားသည်လေ့လာမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆက်တွဲသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပုံကိုရှုထောင့်မှခွင့်ပြုသည့်အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် , ။ ) ။
အကယ်၍ dopamine D1 / D2 receptor activation သည် ဦး နှောက်၏အသစ်အဆန်းကိုအာရုံခံမှုတိုးပွားစေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာ apomorphine ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော dopamine receptors များ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်ဝတ္ထုစာလုံးများအားပိုမိုကြီးမားသော N2 အသစ်အသစ်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ dopamine သည်နောက်ဆက်တွဲသိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပါက၎င်းကို P3a ကဲ့သို့နောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများတွင်ထင်ဟပ်သင့်သည်။ သို့သော် N2 ကိုထိခိုက်မှုမရှိသင့်။
ပုံ 1 ပြန်လည်မှတ်မိခြင်း၏တိကျမှုကိုဖောင့်အသစ်များ (ဝတ္ထု / စံ) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေ (apomorphine / placebo) ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်တင်ပြသည်။ ဝတ္ထုစကားလုံးများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေများအနှံ့အတိအကျတိကျမှန်ကန်မှုကို 30.2% နှင့်စံစကားလုံးများကို 27.3% ဖြစ်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအသစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေများအတွက်အချက်များနှင့်အတူကှဲလှဲ (RM ANOVA) ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ပုံစံကိုယူ။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသ (F1,25 = 2.27, p = 0.143), အသစ်အဆန်းမရှိအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F1,25 = 2.02, P = 0.174), ဒါပေမယ့်, ပြင်းထန်စွာအချက်များအကြားတစ် ဦး အပြန်အလှန် (F1,25 = 4.32, p = 0.048) ။ နောက်ဆက်တွဲဆန့်ကျင်ဘက်အချက်များအရ ၀ တ္ထုအသစ်စာလုံးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် apomorphine အခြေအနေရှိစံဖောင့်စကားလုံးများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ထက်သာလွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။t25 = 2.61, p = 0.015), ဒါပေမယ့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေထဲမှာဝတ္ထုဖောင့်နှင့်စံစကားများအကြားမျှပြန်လည်သိမ်းဆည်းကွာခြားချက်ရှိခဲ့သည်မဟုတ် (t25 = 0.12, P ကို ​​= 0.913) ။ ဤစီစဉ်ထားသောခြားနားချက်များအတွက်စာရင်းအင်းတန်ဖိုးများသည်ကုန်ကြမ်းမမှန်သည့်တန်ဖိုးများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ တိကျမှန်ကန်မှု (%) ကို y ၀ င်ရိုး၌ပြသပြီး apomorphine နှင့် placebo အောက်၌ဝတ္ထုများနှင့်စံနှိုးဆွမှုအတွက်အရက်ဆိုင်များကိုပုံဖော်ထားသည်။
စံဖောင့်စကားလုံးများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသော N2 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ (၏ညာဘက်ဘောင်ကိုကြည့်ပါ ကိန်းဂဏန်း 2) ဝတ္ထုစာလုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ N2 အစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည် (ဘယ်ဘက် panel ကိုကြည့်ပါ ကိန်းဂဏန်း 2) ။ ရှိပြီးသားစာပေနှင့်ကိုက်ညီ , N2 သည် 10-10 လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမည်ပေးခြင်းကွန်ဗင်းရှင်းတွင်အကြမ်းအားဖြင့် Fz နှင့် FCz နှင့်သက်ဆိုင်သော front-central electrode ဆိုဒ်များတွင်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အတွက်တင်ပြအဆိုပါကွက် ပုံ2အဆိုပါ 10-10 လျှပ်စနစ်၏လျှပ် Fz နှင့် Cz ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှ midline လျှပ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအလားအလာရောင်ပြန်ဟပ်။
ERP များသည် apomorphine နှင့် placebo တို့ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးနောက် electroes Fz နှင့် Cz တွင်ဝတ္ထုနှင့်စံလှုံ့ဆော်မှုများကဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၏ထိပ် - လက်ဝဲ panel ကိုအတွက်ရုပ်ပြအဖြစ် ပုံ 2, ဝတ္ထုဖောင့်စကားလုံးများအားဖြင့်ဆွဲထုတ်သောအခါ, apomorphine အခြေအနေလေ့လာတွေ့ရှိသည့် N2 အစောပိုင်းကနှင့်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ N2 သည်တစ်ချိန်တည်းအပြုသဘောဆောင်သည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော P2 နှင့်ထပ်နေသည်၊ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူ 180 ms ပတ်ပတ်လည်တွင်မြင့်နေသည်။ သို့သော် topographical ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေများအကြားလေ့လာ latency ကွဲပြားခြားနားမှု N2 ၏တိကျတဲ့မော်ဂျူညွှန်ပြ။
ကျနော်တို့ N2 အောင်းနေချိန်ပြောင်းကုန်ပြီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရစမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစတင်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည် jackknifed bootstrap လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် N2 စတင်ခြင်းအောင်းနေချိန်ကိုဤအစိတ်အပိုင်းသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးလွှဲခွင်၏ 50% သို့ရောက်ရှိသည့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်သည်။ ။ ) ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ N2 စတင်ခြင်းဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေ (166 ms ထက်) apomorphine အခြေအနေ (176 ms) တွင်အစောပိုင်းကြောင်းကိုပြသ t25 = 2.19, p = 0.041) ။
ဤပုံစံအားပေးထားသော N2 လွှဲခွင်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် apomorphine နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေများအတွက်အမျိုးမျိုးသော latency intervals အပေါ်အခြေခံသည်။ အခြေအနေတစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် N20 ၏အထွတ်အထိပ်ကိုဗဟိုပြုသည့်2ms ကြားကာလကို ဖြတ်၍ လေ့လာတွေ့ရှိရသောပျမ်းမျှလွှဲခွင်ကိုတွက်ချက်သည်။ ။ ထို့ကြောင့် apomorphine အခွအေနေများအတွက် N2 156 နှင့် 176 ms အကြားနှင့် 166 နှင့် 186 ms အကြားရလဒ်များအရအိပ်ယာအခွအေနေအဘို့ယုတ်လွှဲခွင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ရလဒ်များသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မူတည်ပြီး apomorphine ရှိဝတ္ထုစာလုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပိုကြီးသော N2 ကိုပြသည် (t25 = 2.88, p = 0.008) ။ ကြည့်ပါ စားပွဲတင် 1.
ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်တင်ပြထားသည့် ERP အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖော်ပြချက်အပေါ်အရွယ်အစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏ဖော်ပြချက်။
ကျနော်တို့ P3a (ampl250-350 ms ။ Post- နှိုးဆွ) ၏လွှဲခွင်မျှမူးယစ်ဆေး - သွေးဆောင်ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဝတ္ထုစာလုံးများဖြင့်ဖော်ထုတ်ထားသော P3b သည် apomorphine အခြေအနေတွင် (ပုံ - ဘယ်ဘက်ထိပ်၏) ပုံ 2) ။ ထိပ် P3b လွှဲခွင်ကို posterior electrode sites များ၌လေ့လာခဲ့ပြီးစာရင်းအင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် 350-450 Montage ရှိ Cz တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အနေအထားတွင်တည်ရှိပြီးလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုတွင် 10-10 ms post-stimulus မှလေ့လာခဲ့သောယုတ်အလားအလာအပေါ် အခြေခံ၍ လေ့လာခဲ့သည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက apomorphine အခြေအနေဝတ္ထုစာလုံးများအားဖြင့်ထုတ်ယူသည့် P3b လွှဲခွင်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကျဆင်းခြင်းထင်ရှား (t25 = 2.37, p = 0.026) ။
ကျနော်တို့ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် dopamine D1 / D2 အဲဒီ receptor activation ၏အခန်းကဏ္atedကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အဆိုပါ D1 / D2 agonist apomorphine ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တန်းသားများကိုဝတ္ထု - ဖောင့်စကားလုံးလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုတာဝန်ပြီးဆုံးချိန်တွင် EEG ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်ဖြစ်သောသွေးဆောင် anterior N2 နှင့် P3a ERP အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲထုတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ anterior N2 လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်း၏ထောက်လှမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောပေးထားသည် , frontal cortex တွင်တည်ရှိသောအသစ်စက်စက်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ကွန်ယက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည် , ၎င်းသည် dopamine စနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအနက်အသစ်အဆန်းကိုဖော်ထုတ်သည့်အညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရှိပြီးသားအလုပ်က dopamine သည်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတွင်ပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြသည် အထူးသဖြင့်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံဖြစ်စဉ်များ၏မြန်နှုန်းနှင့်အတူ ။ အကယ်၍ D1 / D2 receptor activation သည်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်မှာ apomorphine သည် anterior N2 အပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသင့်သည်။ ဤအချက်နှင့်ကိုက်ညီပါကဒီအစိတ်အပိုင်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပိုကြီးပြီးအစောပိုင်း apomorphine အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
အရေးကြီးချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်ဖော်ထုတ်ထားသည့် anterior N2 အပေါ် apomorphine ၏သက်ရောက်မှုသည်အစောပိုင်းအလုပ်များတွင်တွေ့ရသည့် apomorphine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Ruzicka et al ၌တည်၏။  ပါကင်ဆန်လူနာများအတွက် apomorphine ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကအာရုံခံပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုများကထုတ်ယူလိုက်သော N2 နှင့် P3 ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအခြေအနေများတွင်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သူများထက်ပိုနည်းစေခဲ့သည်။ Ruzicka et al ။ apomorphine ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်အမျိုးအစားအခြေခံသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှေးကွေးကြောင်းကောက်ချက်ချ (ကိုလည်းကြည့်ပါ , , ) ပါကင်ဆန်လူနာများတွင် levodopa ကိုသောက်ပြီးနောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာများစွာတွေ့ရသည် (ဥပမာ - ၄၁) ။ ဤအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအတွက်သိသာ N41 ၏အရှိန်နှင့် amplification ဒီကဗျာဖြစ်ပါတယ်: apomorphine အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအတွက် N2 နှင့် P2 အစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့မြင်ယေဘုယျနှေးကွေးတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်သောအသစ်အဆန်း - သွေးဆောင် N2 အပေါ်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။
apomorphine ၏ယေဘုယျအားဖြင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည့်ဤကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်ကိုက်ညီစွာပါဝင်သူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သော P3 amplitude ကိုအထူးသဖြင့် P3b တွင်လျော့ချခဲ့သည် ပုံ 2) ။ ဤရလဒ်သည် P3a တိုးပွားလာသော dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောယခင်မျိုးရိုးဗီဇအထောက်အထားနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ ။ ၎င်းဆေး၏မျက်နှာကိုကြည့်လျှင် P3 မှညွှန်းဆိုထားသည့်ဂရုပြုမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာယန္တရားများအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သို့သော်စာပေအခြားတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို catecholomine- သွေးဆောင် P3 အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကြားမျှဆက်ဆံရေးမျိုးပြသခဲ့သည်။ တကယ်တော့ Apomorphine တစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိခဲ့ပါတယ် အကျိုးရှိသော ဝတ္ထု - ဖောင့်စကားများ၏စာမျက်နှာအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
ဤပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝတ္ထု - ဖောင့်စကားလုံးများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းရာတွင်ကွဲပြားမှု - the von Restoff effect - anterior N2 တွင်မဟုတ်ဘဲ P3 တွင်ထင်ဟပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအားအသစ်အဆန်းထက်နောက်ဆက်တွဲသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ P3 လွှဲခွင်နှင့် ၀ တ္ထုစကားလုံးတစ်လုံးကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းမည့်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားခွဲခြားမှုကိုပြသခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည် ။ အဆိုပါ P3a အပေါ်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှု၏သိသာမရှိခြင်းတနည်းအားဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းမူးယစ်ဆေးလွှမ်းမိုးမှုများ၏ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်: တစ်ဖက်တွင် apomorphine (လက်ရှိ N3 ရလဒ်များကအကြံပြုသည်အတိုင်း), အသစ်အဆန်းမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် P2a လွှဲခွင်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပြုမူစေခြင်းငှါ, အခြားလက် apomorphine ERP အစိတ်အပိုင်းများ၏လွှဲခွင်အပေါ်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုမှတဆင့် P3a လွှဲခွင်ကိုလျော့ချဖို့ပြုမူလိမ့်မည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလက်ရှိအလုပ်က apomorphine သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သိမှတ်မှုအားထိခိုက်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များက N2 အားဖြင့်ရည်ညွှန်းထားသောအသစ်အဆန်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းပြသသည်။ ဤသည် Redgrave နှင့် Gurney ၏အတွေးအခေါ်များနှင့်အညီဖြစ်သည် ၀ တ္ထုကိုငြင်းဆိုသူ၊ မမျှော်လင့်သောလှုံ့ဆော်မှုများသည်လျှင်မြန်သော၊ ဤဖြန့်ချိမှု၏အခန်းကဏ္ other သည်အခြား ဦး နှောက်နယ်မြေများအားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအသစ်များပေါ်ပေါက်လာစေရေးနှင့်ဤလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သူတို့၏ပုံပန်းသဏ္causedာန်ဖြစ်စေခဲ့သည့်တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်အသစ်အဆန်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပလတ်စတစ်၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လာသည်။
၌ထင်ရှားအဖြစ် ပုံ 2, ဒီလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိသည့် N2 အစိတ်အပိုင်းဟာ ERP ၏ P2 အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူထပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအညီဤနှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုပေါင်းစပ်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ N2 နှင့် P2 နှစ်ခုစလုံးသည်တူညီသော latency interval တွင်တွေ့ရပြီး (polarity ကမဟုတ်သည်) ကိုခွဲခြားရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းတို့သည်တူညီသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူတူပင်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တူသည်။ ၎င်းတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးကပ်သောမီးစက်များ၌လှုပ်ရှားမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ပြီး၊ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်မတူပါ။ (polarity ခြားနားချက်သည် cortical folding ကြောင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်) ။
သို့သော် P2 ပြောင်းလဲမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်ခုတည်းသာတွက်ချက်နိုင်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပထမ ဦး စွာစံဖောင့်များမှထုတ်ယူ P2 လွှဲခွင်ကို apomorphine ၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲရှိပြီးသားရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီစွာ P2 သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ဘဲအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ။ ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာထားသော N2 latency shift သည် P2 ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းမရှိချေ။ P2 သည်နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းနှင့် (P2a နှင့်ပေါင်းလာသော) N3 သည်ဤဒေတာဘေ့စ်အတွင်းရှိကြိမ်နှုန်းမြင့်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအပြုသဘော - polarity ကရှုပ်ထွေးသောအတွက်အပြောင်းအလဲပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်း N2 အထွတ်အထိပ်အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီဖန်တီးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိရလဒ်များသည် anterior N2 ၏အပြောင်းအလဲကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုသော်လည်း၊ အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများကကျွန်ုပ်တို့၏မတူညီသောအပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ , ။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများအရ dopamine သည် MMN ၏မျိုးဆက် (သို့) မော်ဂျူလာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည် ။ ထို့အပြင်အမြင်အာရုံ MMN ၏မီးစက်များသည်အထွocc်အထိပ်withရိယာများတွင်အမြင့်ဆုံးရှိသည့်နောက်ဘက် cortex တွင်တည်ရှိသည်  မဟုတ်ငါတို့ရလဒ်များကိုအတွက်ထင်ရှားသည့် anterior နေရာများတွင်။
ထို့ကြောင့်ငါတို့သည် apomorphine ဟာ anterior N2 အတွက်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကောက်ချက်ချ။ Apomorphine သည်ယေဘုယျအားဖြင့် D1 / D2 receptors အပေါ် agonistic သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ dopamine system တွင်လုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုသည်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် sensitivty တိုးမြှင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်ဟူသောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သို့သော်ဤအယူအဆအားအသိပေးချက် (၂) ခုပေးရမည်။ ပထမ ဦး စွာအနိမ့်သောက်သုံးသောမှာ apomorphine agonist အဖြစ်ပြုမူ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ autoreceptors အပေါ်သက်ရောက်မှုမှတဆင့်ထိရောက်သောရန်သူအဖြစ်ပြုမူခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ , ။ ဤသည်အလားအလာရန်ဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို Parkinsonian လူနာများအတွက်ထိခိုက်သိမြင်မှုသက်ရောက်မှုများအတွက်ရှင်းပြချက်တစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုထားသည် , , ဒါပေမယ့်နိဂုံးသရုပ်ပြခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ apomorphine ဟာအခြေခံမှတ်ဥာဏ်ကိုမထိခိုက်စေပေမယ့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း dopamine ရန်သူသည်ဤပုံစံကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးသည်လက်ရှိသီအိုရီဆိုင်ရာအကောင့်များနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် apomorphine သည် agonist တစ်ယောက်အနေဖြင့်ပြုမူပါကဤအမူအကျင့်တိုးတက်မှုသည် dopamine သည်အသစ်အဆန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်ဟူသောအတွေးနှင့်အလွန်တသမတ်တည်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုသည်ဗဟိုစမ်းသပ်မှုကိုင်တွယ်မှုသည်လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်းဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အသစ်သောဖောင့်စကားလုံးများသည်အရောင်၊ အရွယ်အစားနှင့်ဖောင့်အမျိုးအစားများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များမှစံဖောင့်စာလုံးများနှင့်မတူပါ။ ၎င်းသည်သီအိုရီအရဤနေရာတွင်ဆန်းစစ်ထားသည့်တုံ့ပြန်မှုများ၏မျိုးဆက်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည် N2 နှင့် P3a ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုများကိုထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏အရွယ်အစားတွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ဤလှုံ့ဆော်မှုအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးတွင် dopamine ကြွယ်ဝသော midbrain nuclei ၏လုပ်ဆောင်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ .
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ D1 / D2 agonist apomorphine ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့် ERP ၏ anterior N2 အစိတ်အပိုင်း၏တိုးမြှင့်သည့်အတိုင်းအတာတို့တွင်ထင်ဟပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းဝတ္ထုအရောင်၊ ငါတို့သိသည်အတိုင်း, ဒီ D1 / D2 receptors ၏ activation ရွေးချယ်အသစ်သော ဦး နှောက်ရဲ့ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုးမြှင့် sensitivity ကို၏အခန်းကဏ္novelကိုဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု configurations နှင့်သူတို့နှင့်ဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှု၏သင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်နှင့်ကိုက်ညီစွာကျွန်ုပ်တို့သည် D1 / D2 receptor activation ပြီးနောက်ဝတ္ထု ၀ တ္ထုများကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
VU တက္ကသိုလ်အမ်စတာဒမ်ရှိကျောင်းသား ဦး ရေမှပုံမှန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အမြင်ဖြင့်ပုံမှန်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၆ ယောက်ကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ပါဝင်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမည်သည့်သိထားသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါရောဂါဗေဒကိုမျှတင်ပြခြင်းမရှိပါ။ တက်ရောက်သူအားလုံးသည်စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီးသဘောတူညီချက်ပေးပြီးလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်€ 150 နှင့်ခရီးသွားလာစရိတ်အတွက်လျော်ကြေးများရခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို 17 အမျိုးသမီးများနှင့်9အထီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ အသက်အရွယ်သည် 18 မှ 32 နှစ်အထိ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ 22 yr; sd, 3.9 yr) ဖြစ်သည်။ တက်ရောက်သူ ၂၃ ဦး မှန်တယ်။ လေ့လာမှုကိုဟယ်လ်စင်ကီကြေညာစာတမ်းနှင့်သဘောတူပြီး VU တက္ကသိုလ်အမ်စတာဒမ်၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကို apomorphine ၏အရေပြားအောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်တခါနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက်, double- မျက်စိကန်းစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ သယ်ဆောင်ရမည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းနှစ်ခုကိုတစ်ပတ်ခြား။ စီစဉ်ထားပြီးသင်တန်းသားများကိုအစဉ်လိုက်မျှတအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
apomorphine ဆွေးနွေးပွဲတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအသိအမှတ်ပြုသုတေသီတစ် ဦး မှ 0.005 mg / kg အချိုးဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ Apomorphine ကို Brittannia Pharmaceuticals Ltd. (စီးပွားဖြစ်အမည်ဖြစ်သော Apo-Go) မှရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ်များအရအိပ်ယာ session တစ်ခုအတွက်ဆားတူညီထုံးစံနှင့်အသံအတိုးအကျယ်အတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ apomorphine နှင့်ဆားဆေးများကိုဆေးဆိုင်မှသိမ်းဆည်းထားသောကုဒ်များနှင့် ခွဲခြား၍ မရသောဆေးထိုးအပ်များမှသုတေသီထံသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။
apomorphine သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာတွင်ပါ ၀ င်သူများနှစ် ဦး စလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုမတိုင်မှီမိနစ် ၃၀ တွင် 40 mg နှုတ်ဖြင့်ဆေးသွင်းရသော Domperidone, D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့်အရံအာရုံကြောစနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ ) ။ Domperidone ကိုဂျွန်ဆင်နှင့်ဂျွန်ဆင် (စီးပွားဖြစ်အမည်ရှိ Motilium) မှ ၁၀ မီလီဂရမ်ပါးလွှာသောဆေးပြားဖြင့်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် D10 Agonists ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, 11 သင်တန်းသားများကို apomorphine ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤဆေးကိုပေါင်းစပ်ထားသောလက်ရှိအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည် , ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခဏတာသာဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့် 15 မိနစ်ထက်မပိုပါ။ ပါဝင်သူများကဤကြားကာလပြီးနောက်နိုးနိုးကြားကြားရှိနေပြီးအလုပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်
ပုံ3စမ်းသပ်ခြင်း session တစ်ခုသိထားကိုယ်စားပြုမှုပြသထားတယ်။ apomorphine တွင် 40 မှ 50 မှမိနစ်ခန့်မြင့်တက်သောကြောင့်စမ်းသပ်မှုသည်မိနစ် ၄၀ တွင်စတင်ခဲ့သည် , ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပြင်ထားသော von Restorff နှုတ်ဖြင့်သင်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်စံဖောင့်နှင့်စကားလုံးဝတ္ထုများတွင်ဖော်ပြထားသောစကားလုံးများကိုလေ့လာပြီးပြန်လည်မှတ်မိစေသည်။ အသစ်သောဖောင့်စာလုံးများကိုသာမန်စာလုံးများထက်မှတ်မိသည် ။ အလုပ်၏သိထားကိုယ်စားပြုမှုမှာပြထားပါသည် ပုံ 3။ ၎င်းတွင်လေ့လာမှုအဆင့်၊ ပြန်လည်မှတ်မိသည့်အဆင့်နှင့်နောက်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုအဆင့်တို့ပါ ၀ င်သော်လည်းနောက်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုအဆင့်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်မျက်နှာကျက်တွင်ရှိပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းအဆင့်မှရလဒ်များကိုသာဖော်ပြထားသည်။
လေ့လာမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း 80 ကွန်ကရစ်နာမ်များစာရင်းကိုပါဝင်သူများအားစကားလုံးအရှည်5နှင့် 10 အက္ခရာများအကြားကွဲပြားသည်။ သီးခြားစာရင်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ခုစီသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီအတွက်တစ်ခုစီဖြစ်သည်။ အဆိုပါစကားလုံးများကိုဗန်အိုဗာရှယ်လ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအသုံးပြုကြသည် အဘိဓာန်၏အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။
စာရင်းတစ်ခုစီရှိစကားလုံးများကိုသာမန်ဖောင့် (Courier New၊ 60 သာဓကများ) သို့မဟုတ်ဝတ္ထုတစ်မျိုး (20 သာဓကများ) တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ အသစ်သောဖောင့်စကားလုံးများတွင်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည် (ဖြစ်နိုင်သည့်အရောင်ဆယ်ခုအနက်တစ်ခုသည်အရောင်တစ်ခုစီ၏စာရင်းတွင်နှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပါ ၀ င်သည်)၊ typeface အမျိုးမျိုး (စာရင်းအတွင်းရှိဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ထူးခြားသည်) နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိခဲ့သည်။
စာရင်းတစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီ၌နှစ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်၊ အစဉ်လိုက်၊ စာလုံး၊ အရောင်များပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲပါဝင်သူများသည်ပထမ ဦး ဆုံးတင်ဆက်ပြီးနောက်ခေတ္တနားခဲ့ကြသည်။ စကားလုံးများကိုရှေ့တွင် 21 စင်တီမီတာရှိသောမီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင် (အရွယ်အစား 80″) ၏အလယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာ - စာလုံးအရွယ်အစား (ဖောင့်အရွယ်အစား 17) သည် 2.5 အားအမြင်အာရုံထောင့်၏5ဒီဂရီသို့စာလုံးအရှည်နှင့်ဝတ္ထုပေါ်မူတည်သည်။ စကားလုံး (ဖောင့်အရွယ်အစား 30) 5.7 မှ 9.6 မှအမြင်အာရုံထောင့်။
တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး 400 ၏ 500 ms (ယူနီဖောင်းဖြန့်ဖြူး) မှကျပန်းကြားကာလများအတွက် fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်၏တင်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ စကားလုံးတစ်လုံးအားမျက်နှာပြင်အလယ်တွင်တင်ပြပြီး 3500 ms အတွက်မြင်နိုင်သည်။
လေ့လာမှုအဆင့်တွင်သင်တန်းသားများကိုစကားလုံးများကိုလေ့လာရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ cued ပြန်လည်သိမ်းဆည်းအဆင့်မှာတော့သင်တန်းသားများကိုယခင်လေ့လာသင်ယူသောစကားများ (40 ဝတ္ထုစကားလုံးများနှင့်စံစကားလုံးများ၏ကျပန်း 20 - - အားလုံးစံစကားလုံးများကိုလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏ကြာချိန်ကိုလျှော့ချဖို့ cued ခဲ့ကြသည်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်အားလုံးစံစကားလုံးများကို) cues နှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့သည်။ စကားများသည်စကားလုံးတစ်လုံးစီ၏ပထမစာလုံးနှစ်လုံးပါ ၀ င်ပြီးတစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်စီကိုကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်တင်ပြသည်။ ပါဝင်သူများသည်ကျန်ရှိသောစာလုံးများကိုရိုက်။ လေ့လာပြီးသောစကားလုံးကိုပြီးစီးစေသည်။ လေ့လာခဲ့သောစကားလုံးတစ်လုံးစီတွင်ပထမစာလုံးနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။
အမြင်အာရုံစကားလုံးလှုံ့ဆော်မှုများအပြင်လေ့လာမှုကာလအတွင်းစကားလုံးတစ်ခုချင်းစီ၏အမြင်အာရုံစတင်သည့်နောက်ကြားနာမှုနှိုးဆွမှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံစတင်ခြင်းအကြားကြားကာလကိုကျပန်း 817 ၏ယူနီဖောင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ 1797 ms မှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အသံနှစ်မျိုးရှိ၏ 2.2 စမ်းသပ်မှုများမှ 300 တွင်တင်ပြခဲ့သောစံနမူနာ 'beep' (58 KHz, 80 ms) သို့မဟုတ် 300 စမ်းသပ်မှုများမှ 22 တွင်တင်ပြခဲ့သောစမ်းသပ်မှု - ထူးခြားသောအသံကလစ် (80 ms) တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ။ အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အမြင်အာရုံစကားလုံးများအကြားဆက်နွယ်မှုမရှိသဖြင့်သင်တန်းသားများကိုအသံများကိုလျစ်လျူရှုရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အသစ်သောအပြောင်းအလဲနဲ့၏လွတ်လပ်သောအတိုင်းအတာလိုက်လျောဖို့အာရုံလှုံ့ဆော်မှုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေအခြားနောက်ဆက်တွဲရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီ, စံတန်ချိန်များနှင့်ထူးခြားသောအသံကလစ်များ၏ differential ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့၏ဒေတာအတွက်သက်သေအထောက်အထားမရှိခဲ့နှင့်ဤခြယ်လှယ်ဖြစ်ပါတယ် ထပ်မံဆွေးနွေးကြသည်မဟုတ်။
EEG ကို BioSemi Active128 စနစ် (BioSemi, Amsterdam, the Netherlands) ကို အသုံးပြု၍ ဦး ရေပြားနေရာမှမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို radial ABC BioSemi montage အရသိရသည်။ ဒေါင်လိုက် electro-oculogram (EOG) သည်2လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှ2cm နေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျက်စိ၏အပြင်ဘက် canthi မှနှစ် ဦး နှစ်ဖက်, အလျားလိုက် EOG လက်ျာမျက်လုံးအထက်နှင့်အောက်တွင်ထားရှိ 1 လျှပ်ကူးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်, လက်ျာနှင့်ဘယ်ဘက် mastoids ကျော်ထားရှိလျှပ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့သည်။ နမူနာနှုန်းမှာ2Hz ဖြစ်သည်။ Biosemi သည်ရိုးရှင်းသော differential EEG အသံချဲ့စက်ထက်မောင်းနှင်ထားသောညာဘက်ခြေထောက်ချဲ့စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြေပြင်လျှပ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း EEGlab နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်  နှင့်ထုံးစံ - တိကျမ်းစာ၌လာသည် Matlab script များ။ EEG ဒေတာကို 500 Hz သို့ပြောင်းပြန် mastoid electrodes နှစ်ခုမှ signal ၏ပျမ်းမျှအားရည်ညွှန်းသည်။ ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်စစ်ထုတ်သည် (0.05-40 hz;6hz ၏ 0.01 db အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူအကန့်အသတ်မဲ့ဒေါသဖြစ်စရာအနည်းဆုံးစတုရန်း kernel) ။ နှင့်6hz ၏2db အကူးအပြောင်း။ High-pass filter ကိုများအတွက်) နှင့်လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းရှေ့ 100 ms ကြားကာလအပေါ် baselined ။
လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးပြိုကျ epoched ဒေတာကနေတွက်ချက်ခဲ့သည် , ။ တောက်ပသောအပိုပစ္စည်းများကိုစာရင်းပြုစုသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ဖော်ထုတ်ပြီးဒေတာမှဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှသိသိသာသာကြွက်သားအပိုပစ္စည်းများကိုပြသသည့်စမ်းသပ်မှုများကိုထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှပယ်ချခဲ့သည် (ငြင်းပယ်မှုအတွက်တံခါးခုံကို 100 / -100 μV) ဟုသတ်မှတ်သည်။ ဤသည်ဘာသာရပ်နှုန်းအချက်အလက်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5% ၏ငြင်းပယ်ခံရမှုရလဒ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ် per- ဘာသာရပ်ပျမ်းမျှအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ မူးယစ်ဆေးအခြေအနေ 37 ဝတ္ထုစမ်းသပ်မှု, ခ။ ) 38 ဝတ္ထုစမ်းသပ်မှု, c ကိုအတွက်စမ်းသပ်မှု။ ) 112 စံမူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေစမ်းသပ်မှုများနှင့်d။ ) ရလဒ်များအရအိပ်ယာအခြေအနေ 116 စံစမ်းသပ်မှုတွေ။
MM ကို NWO မှ VIDI ထောက်ပံ့ငွေ 452-09-007 မှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ CH ကို NWO မှ VENI ထောက်ပံ့ငွေ 016-125-283 မှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရေးစာမူကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်အခန်းကဏ္noတွင်မရှိခဲ့ပါ။
1 ။ Ranganath ကို C, Rainer, G (2003) ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များကို detect နှင့်မှတ်မိဘို့အာရုံကြောယန္တရားများ။ နတ်ဗြာ Neurosci 4: 193 – 202 [PubMed]
2 ။ Pritchard W, Shappell S, N1991 / N200 ၏ Brandt M (400) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားခြင်းအစီအစဉ်။ In: Jennings J၊ Ackles P၊ အယ်ဒီတာများ။ psychophysiology အတွက်တိုးတက်လာ: တစ် ဦး ကသုတေသနနှစ်ပတ်လည်။ လန်ဒန်: ဂျက်စီကာ Kingsley ။ 43-106
3 ။ Spencer KM, Dien J, Donchin E (1999) ERP ၏အစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုသည်သိပ်သည်းသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းခင်းကျင်းမှုကို သုံး၍ ဝတ္ထုအဖြစ်အပျက်များမှပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ 36: 409 – 414 [PubMed]
4 ။ Squires NK, Squires KC, Hillyard SA (1975) လူ၏ခန့်မှန်းရခက်သောအာရုံလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောရှည်လျားသောကြာရှည်သည့်အပြုသဘောလှိုင်းတံပိုးနှစ်မျိုး။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol 38: 387-401 [PubMed]
5 ။ Daffner KR, Mesulam MM, Scinto LF, Calvo V, Faust R, et al ။ (2000) လှုံ့ဆော်မှုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တစ်ခု electrophysiological အညွှန်းကိန်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ 37: 737 – 747 [PubMed]
6 ။ Tarbi EC, Sun X, Holcomb PJ, Daffner KR (2010) အံ့သြစရာလား။ အစောပိုင်းအမြင်အာရုံအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့် modulated မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ 48: 624 – 632 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Ferrari V, Bradley MM, Codispoti M, Lang PJ (2010) အသစ်နှင့်အရေးပါမှုကိုဖော်ထုတ်သည်။ J ကို Cogn Neurosci 22: 404-411 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ Folstein JR၊ Van Petten C (2008) သည် ERP ၏ N2 အစိတ်အပိုင်းအပေါ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်မတိုက်ဆိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှု - သုံးသပ်ချက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ 45: 152 – 170 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Kujala T က, Kallio J ကို, Tervaniemi M က, Naatanen R ကို (2001) ကြားနာအတွက်ယာယီအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုအညွှန်းကိန်းအဖြစ်မတိုက်ဆိုင်အဆိုးမြင်သဘောထား။ Clin Neurophysiol 112: 1712 – 1719 [PubMed]
10 ။ အဖြစ်အပျက် -related အလားအလာများကဖော်ပြအဖြစ်အာရုံနှင့်အမြင်အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုစဉ်အတွင်းအာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏ Alho K ကို, Woods DL, Algazi A (1994) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ 31: 469 – 479 [PubMed]
11 ။ Szucs: D, Soltesz F, Czigler ၁၊ Csepe V (2007) Electroencephalography သက်ရောက်မှုများသည်အမြင်အာရုံဖြင့်တင်ပြထားသော single-character များ၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် semantic နှင့် semantic မတိုက်ဆိုင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - N2b နှင့် N400 ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအက္ခရာများ 412: 18 – 23 [PubMed]
12 ။ Crottaz-Herbette S, Menon V (2006) anterior cingulate cortex အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတုန့်ပြန်သည့်နေရာနှင့် fMRI နှင့် ERP အထောက်အထား။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 18: 766-780 [PubMed]
13. Kopp B၊ Wessel K (၂၀၁၀) ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အလားအလာများနှင့်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ - မော်တာသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ။ သိမှု, အကျိုးသက်ရောက် & အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ 2010: 10-316 [PubMed]
၁၄။ Friedman D၊ Cycowic YM, Gaeta H (14) P2001 သည်အသစ်အဆန်းကို ဦး နှောက်၏အကဲဖြတ်မှုတွင်အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အလားအလာ (ERP) လက္ခဏာဖြစ်သည်။ Neurosci Biobehav Rev 3: 25-355PubMed]
15 ။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု -P2010 ၏လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုတွင် SanMiguel I, Morgan HM, Klein C, Linden D, Escera C (3): မမျှော်လင့်သောဝတ္ထုအသံများ၏ပံ့ပိုးကူညီမှု။ Biol Psychol 83: 143 – 152 [PubMed]
16 ။ Courchesne E, Hillyard SA, Galambos R (1975) Stimulus အသစ်အဆန်း၊ အလုပ်နှင့်ဆက်နွယ်မှုနှင့်လူတို့တွင်အမြင်အာရုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol 39: 131-143 [PubMed]
17 ။ Soltani M, Knight RT (2000) P300 ၏အာရုံကြောဇစ်မြစ်။ neurobiology အတွက်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များ 14: 199 – 224 [PubMed]
18 ။ အသစ်တီထွင်မှု၏ Gabbay FH, Duncan က CC ကို, မက်ဒေါ်နယ် CG (2010) ဦး နှောက်အလားအလာညွှန်းကိန်း amphetamine များအတွက် preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာ 18: 470 – 488 [PubMed]
et al 19. Grzella ငါ, Muller BW, Oades RD, Bender S, Schall U ။ ဝန်ခံချက်နှင့်ရိနာစွဲအပေါ် schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက် (2001) အသစ်အဆန်း - ရူးနှမ်းအငြင်းပွားမှုများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်: JPN ၂၆: ၂၃၅-၂၄၆ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၂၀။ Djamshidian A၊ O'Sullivan SS, Wittmann BC, Lees AJ, Averbeck BB (20) Parkinson ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုရှာဖွေခြင်း Neuropsychologia 2011: 49-2483 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Wittmann ဘီစီ, Bunzeck N ကို, Dolan RJ, Duzel အီး (2007) recollection မြှင့်တင်နေစဉ်အသစ်အဆန်းစုဆောင်းမှုဆုလာဘ်စနစ်နှင့် hippocampus ၏မျှော်လင့်။ Neuroimage 38: 194 –202 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Garcia-Garcia က M, Barcelo F, Clemente IC, Escera C (2011) COMT နှင့် ANKK1 ဗီဇ - မျိုးဗီဇအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုအခြေအနေကိုအဆင့်မြှင့်သည်။ Neuroimage 56: 1641 –1647 [PubMed]
23 ။ Garcia-Garcia M, Barcelo F, Clemente IC, Escera C (2010) အလုပ်အသစ်၏အလျင်အမြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွင် DAT1 ဗီဇ၏အခန်းကဏ္။ ။ Neuropsychologia 48: 4136 – 4141 [PubMed]
24 ။ Polich J ကို, P2006a နှင့် P3b ၏ Criado JR (3) Neuropsychology နှင့် neuropharmacology ။ Int J Psychophysiol 60: 172 – 185 [PubMed]
25 ။ Polich J (2007) P300 ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း - P3a နှင့် P3b ၏ပေါင်းစပ်သီအိုရီ။ Clin Neurophysiol 118: 2128 – 2148 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Kenemans JL, Kahkonen S (2011) လူ့ဆဲလ်ဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒစိတ်ပညာဆိုင်ရာဗေဒကိုအကြောင်းကြားပုံ - အောက်ခြေမှမောင်းနှင်သောထုတ်လုပ်မှုမှသည်အပေါ်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology 36: 26-51 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Redgrave P, Gurney K (2006) တိုတောင်းသောကြာချိန် dopamine အချက်ပြ - ဝတ္ထုလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၏အခန်းကဏ္?? နတ်ဗြာ Neurosci 7: 967 – 975 [PubMed]
၂၈။ Hazy TE, Frank MJ, O'Reilly RC (28) သင်ယူမှုတွင်ရရှိသော phasic dopamine တုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ Neurosci Biobehav Rev 2010: 34-701 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29. Ruzicka E, Roth J, Spackova N, Mecir P, Jech R (1994) Apomorphine သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု 57: 998-1001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Nakamura K, Kurasawa M, Tanaka Y (1998) Apomorphine-induced hypoattention နှင့်ကြွက်များတွင် hyirattention နှင့် aniracetam အားဖြင့်ရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်း၏ပြောင်းပြန်။ Eur J ကို Pharmacol 342: 127-138 [PubMed]
31 ။ [Trace field ထဲမှာလယ်ကွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ] Von Restorff H (1933) über die Wirkung von Bereichsbildungen im Spurenfeld ။ စိတ်ပညာ Forschung 18: 299-234
32 ။ Kishiyama MM, Yonelinas AP, Lazzara MM (2004) amnesia တွင်ရှိသော von Restorff အကျိုးသက်ရောက်မှု - hippocampal စနစ်၏အသစ်အဆန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်မှုအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 16: 15-23 [PubMed]
33 ။ Meeter M, Talamini LM, Murre JMJ (2004) Mode သည်သိမ်းဆည်းထားသော hippocampal ဆားကစ်များတွင်အသစ်အဆန်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပေါ်အခြေခံပြီးသိုလှောင်မှုနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုအကြားပြောင်းလဲသည်။ Hippocampus 14: 722 – 741 [PubMed]
34 ။ Hasselmo ME, Bradley P, Wyble BP, Wallenstein GV (1996) ဇာတ်လမ်းတွဲအမှတ်တရများကိုကုဒ်သွင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း - hippocampus ရှိ cholinergic နှင့် GABAergic modulation ၏အခန်းကဏ္။ ။ Hippocampus 6: 693 – 708 [PubMed]
35 ။ Kiesel A၊ Miller J၊ Jolicoeur P၊ Brisson B (2008) ERP ၏ကြာမြင့်စွာကွာခြားမှုများကိုတိုင်းတာသည်။ တစ် ဦး တည်းပါဝင်သူနှင့်ဓားကိုအခြေခံသည့်အမှတ်ပေးနည်းများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ 45: 250 –274 [PubMed]
အခြေအနေများအကြား ERP ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အရေအတွက်နှင့်စာရင်းအင်းစမ်းသပ်ဘို့ 36. Hoormann J ကို, Falkenstein M က, Schwarzenau P ကို, Hohnsbein J ကို (1998) နည်းလမ်းများ။ အပြုအမူသုတေသနနည်းလမ်းများတူရိယာ & ကွန်ပျူတာများ 30: 103-109
37 ။ Tulving E, Markowitsch HJ, Craik FE, Habib R, Houle S (1996) အသစ်အဆန်းနှင့် PET မှတ်ဉာဏ် encoding နှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏လေ့လာမှုများတွင်အကျွမ်းတဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ Cereb Cortex 6: 71 – 79 [PubMed]
38 ။ Barcelo F, Knight RT (2007) လူ့ ဦး နှောက်တွင်အခြေအနေနှင့်ဆိုင်သောအပြောင်းအလဲကိုသတင်းအချက်အလက်သီအိုရီအရ - prefrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ Cereb Cortex 17 ပေးသွင်းသူ 1i51 –60 [PubMed]
39 ။ Takeshita S, Ogura C (1994) သည်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာများနှင့်ကန ဦး တန်ဖိုး၏ဥပဒေနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့် dopamine D2 ရန်သူ sulpiride ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ပညာဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဂျာနယ် 16 - 99 – 106PubMed]
40 ။ ကျန်းမာသောသင်တန်းသားများတွင် P2010a နှင့် P3b တို့၏လျှော့ချမှုကို Albrecht MA၊ Martin-Iverson MT, Price G, Lee J, Iyyalol R (3) Dexamphetamine - သွေးဆောင်မှုလျော့နည်းစေသည်။ psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ [PubMed]
41 Prasher: D, Findley L (1991) Dopaminergic သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင်သိမြင်မှုနှင့်မော်တာပြုပြင်ခြင်းပြောင်းလဲမှုများကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အာရုံကြော, neurosurgery နှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု 54 ဂျာနယ်: 603-609 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ Garcia-Garcia M, Clemente I, Dominguez-Borras J, Escera C (2010) Dopamine Transporter သည်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဖြင့်အသစ်အဆန်းပြုပြင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်သည်။ Neuropsychologia 48: 1483 – 1488 [PubMed]
43 ။ အဆိုပါဗွန် Restorff အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အသစ်အဆန်း၏အခန်းကဏ္ofကို Rangel-Gomez M, Meeter M (2013) Electrophysiological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ အမြင်အာရုံပစ်မှတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိအတွက် Potts GF, Liotti M, Tucker DM, Posner MI (1996) Frontal နှင့်ယုတ်ညံ့ယာယီ cortical လှုပ်ရှားမှု: မြင့်မားသော Spatial နမူနာအဖြစ်အပျက် -related အလားအလာကနေအထောက်အထား။ ဦး နှောက်မြေမျက်နှာသွင်ပြင် 9:3–14
45 ။ Näätänen R၊ Gaillard AWK, Mäntysalo S (1978) အစောပိုင်းရွေးချယ်မှု - အာရုံစူးစိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေါ်ပေါက်စေသည့်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။ Acta Psychologica 42: 313 – 329 [PubMed]
46 ။ Naatanen R, Gaillard AW, Mantysalo S (1980) ဦး နှောက်အလားအလာရှိသောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ Prog Brain Res 54 - 343 –348 [PubMed]
47 ။ Hansenne M က, Pinto အီး, Scantamburlo, G, Couvreur တစ် ဦး, Reggers J ကို, et al ။ (2003) မတိုက်ဆိုင်သည့်အဆိုးမြင်မှုများသည်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များရှိ catecholaminergic လှုပ်ရှားမှု၏ neuroendocrine အညွှန်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ လူ့စိတ် - ဆေး - လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ 18 - 201 - 205 [PubMed]
48 ။ Kimura M, Schroger E, Czigler I (2011) အမြင်အာရုံနှင့်မကိုက်ညီသောအမြင်နှင့်အမြင်ဆိုင်ရာသိမြင်မှုသိပ္ပံတွင်ယင်း၏အရေးပါပုံ။ Neuroreport 22: 669 –673 [PubMed]
49 ။ Kellendonk ကို C, Simpson EH, Polan HJ, Malleret, G, Vronskaya S, et al ။ (2006) သည် striatum ရှိ dopamine D2 receptors ၏ယာယီနှင့်ရွေးချယ်သောအလွန်အကျွံဖိနှိပ်မှုကြောင့် prefrontal cortex လုပ်ဆောင်မှုတွင်မြဲမြဲပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neuron 49: 603 – 615 [PubMed]
50 ။ အဆိုပါ striatum အတွက်လီ YC, Kellendonk ကို C, Simpson EH, Kandel ER, Gao WJ (2011) D2 အဲဒီ receptor overexpression အတွက် striatum အတွက် inhibitory ဂီယာနှင့်မောက် prefrontal cortex အတွက် dopamine sensitivity ကိုတစ် ဦး လိုငွေပြမှုစေပါတယ်။ Proc Natl Acad သိပ္ပံ USA 108: 12107 –12112 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 51. Costa A, Peppe A, Dell'Agnello, G, Carlesimo GA, Murri L ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အမြင်အာရုံ - Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (2003) Dopaminergic မော်ဂျူ။ Dement Geriatr Cogn Disord 15: 55-66 [PubMed]
52 ။ Schellekens AF, Grootens KP, Neef C, Movig KL, Buitelaar JK, et al ။ (2010) apomorphine ၏သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လူသားများတွင် sensorimotor ဂိတ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 207 - 559 – 569 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Bunzeck N, Düzel E (2006) သည်လူ၏ Substantia Nigra / VTA တွင်လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်း၏အကြွင်းမဲ့ကုဒ်ရေးသည်။ Neuron 51: 369 – 379 [PubMed]
54. Pirtosek Z (၂၀၀၉) Pararkinsonian မူးယစ်ဆေးဝါးများမှလူဆိုးများ။ စိတ်ရောဂါ Danub 2009: 21-114 [PubMed]
55 ။ Schellekens AF, van Oosterwijck AW, Ellenbroek B, de Jong CA, Buitelaar JK, et al ။ (2009) အဆိုပါ dopamine agonist apomorphine ကွဲပြားခြားနားသောအရက်မှီခိုလူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ရောက်သည်။ Eur Neuropsychopharmacol 19: 68-73 [PubMed]
56 ။ Van Overschelde JP, Rawson KA, Dunlosky J (2004) အမျိုးအစားစံသတ်မှတ်ချက်များ - Battig နှင့် Montague (1969) စံချိန်စံညွှန်းများအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဗားရှင်း။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဘာသာစကား၏ဂျာနယ် 50: 289-335
57 ။ Delorme A, Makeig S (2004) EEGLAB - လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပါအဝင် single-trial EEG ဒိုင်းနမစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် Toolbox ။ J ကို Neurosci နည်းလမ်းများ 134: 9-21 [PubMed]
58 ။ Delorme A, Sejnowski T, Makeig S (2007) အဆင့်မြင့်စာရင်းဇယားများနှင့်အမှီအခိုကင်းသောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို အသုံးပြု၍ EEG ဒေတာအတွင်းရှိရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း။ Neuroimage 34: 1443 –1449 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Jung TP, Makeig S, Westerfield M, Townsend J, Courchesne E, et al ။ (2000) သာမန်နှင့်လက်တွေ့ဘာသာရပ်များရှိမျက်စိဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပိုပစ္စည်းများကိုအမြင်အာရုံအဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာများမှဖယ်ရှားခြင်း။ Clin Neurophysiol 111: 1745 – 1758 [PubMed]